खाद्यवस्तुको म्याद कति ?- विविधा - कान्तिपुर समाचार
म्याद सकिएको खाद्य वस्तुलाई उचित प्रविधिद्वारा पुन: उपयोगमा ल्याउनसके खाद्य सुरक्षामा मद्दत पुग्छ ।
श्रावण २९, २०७५ सन्तोष ढकाल
काठमाडौँ — म्याद नाघेको खाद्यवस्तुु सेवन गर्न मिल्छ र ? कतिपयलाई यो प्रश्न गर्नु मुर्खता लाग्न सक्छ । उपभोग्य मिति समाप्त भएको थाहा हुँदाहुँदै पनि त्यस्ता खाद्यवस्तुु खरिद गर्ने उपभोक्ता सायदै होलान् । किनकि उपभोक्ताले तिर्ने मूल्य गुणस्तरयुक्त खाद्यवस्तुुका लागिमात्र हो ।
सम्झनुहोस्, कतिपय खाद्यवस्तुु बजारबाट किनेर घरमा ल्याएपछि मात्र उपभोग्य मिति समाप्त भएको हुनसक्छ । उपभोक्ताले खरिद गरी ल्याएको खाद्यवस्तुु फिर्ता नहुन पनि सक्छ । खाद्यवस्तुु प्याकेटबाट खोलिसकेपछि उपभोग्य मिति हुनु/नहुनुको कुनै अर्थ रहँदैन । अनि तपाईंहरू कैयौंले त्यस्ता खाद्यवस्तुुलाई फालेको वा नष्ट गरेको पनि हुनसक्छ । तपाईंले त्यसो गर्नुभएको छ भने त्यो अलि हतारो हुनसक्छ ।
खाद्य वैज्ञानिकका अनुसार प्राय:जसो खाद्यवस्तुु उपभोग्य मिति समाप्तपछि खान मिल्छ । अमेरिकास्थित ओहायो विश्वविद्यालयका प्रोफेसर ब्रायन रोअका अनुसार लेबलमा लेखिएको म्यादले खाद्यवस्तुु कहिले बिग्रिन्छ तथा कुहिन्छ भनेर बताउने होइन ।
म्याद नाघेको खानेकुरा सेवन गर्दा त्यसमा हुने पौष्टिक तत्त्व घट्न सक्छ । म्याद नाघ्नु अघिको अवस्था जस्तो स्वादिलो नहुन सक्छ । कतिपयलाई अरुचि हुन्छ । तर यसको सेवनले बिरामी पर्ने प्राय: हुँदैन । धेरैजसो उपभोक्ता प्याकेटमा उल्लेख गरिएको डेट लेबलिङलाई स्वच्छता तथा हाइजिनको सूचक मान्छन् । तर डेट लेबलिङ स्वच्छताको नभएर अन्य गुणस्तरको प्रतीक हो । खाद्यवस्तुु बिग्रिएर अखाद्य अवस्थामा पुग्न भनेको गुणस्तर नाश भएको भन्दा टाढाको समय हो । जस्तो– कुनै खाद्य वुस्तुको म्याद ६ महिनापछि समाप्त हुन्छ भने त्यसको भोलिपल्टै विष बन्छ भन्ने हुँदैन । तसर्थ यसबारे निर्णय गर्ने अधिकार उपभोक्तालाई दिनु बेस हुन्छ ।
स्वच्छता र गुणस्तर दुई फरक विषय हुन् । आधुनिक युगमा स्वच्छतालाई गुणस्तर अन्तर्गत राखिँंदैन । मानव स्वास्थ्यलाई प्रतिकूल असर पार्न सक्ने तत्त्वहरू (हानिकारक जीवाणु, हानिकारक रसायन, एलर्जन, धारिलो वस्तु) स्वच्छता अन्तर्गत पर्छन्, जसको उपस्थितिसंँग सम्झौता हुँदैन । उद्योगीले आफ्ना उत्पादनको स्वच्छताको ग्यारेन्टी उद्योगमा प्रशोधन गर्दै तय गरेको हुनुपर्छ ।
केन्द्रीय प्रविधि क्याम्पस धरानका सहप्राध्यापक ऋषिराज गौतमका अनुसार स्वच्छता ‘क्रिटिकल डिफेक्ट’भित्र पर्ने हुँदा यसलाई उपभोग्य मिति अनुमान गर्ने साधनका रूपमा प्रयोग गरिँदैन । कुनै खाद्यवस्तुुमा प्रशोधनपश्चात् पनि विषाक्त जीवाणु पाइयो भने त्यो समयका कारणले नभएर ‘पोष्ट प्रोसेसिङ कन्टामिनेसन’ले हुनसक्छ ।
खाद्यवस्तुुको बाहिरी आवरणमा शंका लागे वा स्वाभाविक अवस्थामा नरहेको पाइए (जस्तै– प्याकेट प्वाल परेको, कुच्चिएको, ग्यासले भरिएको, खिया लागेको, च्यातिएको वा फुटेको) हानिकारक जीवाणुको प्रवेश हुनसक्छ । त्यस्तो खाद्यु वस्तु लेबलमा जेसुकै लेखिए पनि खरिद नगर्नु वा खरिद गरिसकेको भए फाल्नु वा नष्ट गर्नु बेस हुन्छ ।
स्वच्छता बाहेकका अन्य गुणस्तर कमसल हुँदैमा नष्ट गर्नैपर्ने भन्ने हुँदैन । ओसिएका बिस्कुट, चिउरा, भुजिया, चिप्स आदिलाई अखाद्य भन्न मिल्दैन । बजारमा पाइने कतिपय फलफूल तथा तरकारी चोटपटक लागेका, रंग खुइलिएका, ओइलिएका, दाग लागेका र धेरै पाकेर गल्न लागेका हुन्छन् । ती अखाद्य हुन्नन्, तर म्याद नाघेको श्रेणीमा पर्न सक्छन् । बिक्री मूल्य घटाएर राखिएका ती वस्तुलाई उपभोक्ताले सजिलै स्वीकार गरेको पाइन्छ ।
खाद्य नियमावली २०२७ को नियम १८ ले लेबलमा अनिवार्य रूपमा ब्याच नम्बर, उत्पादन मिति र उपभोग्य मिति उल्लेख गर्नुपर्ने भनेको छ । खाद्य ऐन २०२३ को दफा ४ ले ढाँटी–झुक्याई कमसल खाद्यवस्तुु बिक्री गर्न बन्देज गरेको छ । खाद्यवस्तुुको गुणस्तर तथा स्वच्छता कायम गर्ने दायित्व उत्पादकको हो । उत्पादित वस्तुको म्याद (एक्स्पाइरी डेट) पनि उत्पादकले तोक्छन् । खाद्य ऐन कार्यान्वयन, उद्योग अनुगमन, निरीक्षण तथा लाइसेन्स वितरण खाद्य प्रविधि तथा गुण नियन्त्रण विभाग र यस अन्तर्गत तोकिएका निकायले गर्छन् ।
बजार अनुगमनमा म्याद नाघेका खाद्यवस्तु भेटिए नष्ट गर्ने चलन छ । प्रयोगशाला परीक्षणबिना खाद्यवस्तु नष्ट गर्दा एकातिर ऊर्जा खेर जान्छ भने अर्कोतिर वातावरणमा नकारात्मक प्रभाव पर्छ । अर्कोतिर खाद्यवस्तुुको उपभोग्य अवधि कुन आधारमा निर्धारण गर्ने भनेर राज्यको तर्फबाट पनि प्रस्ट मापदण्ड छैन । धेरै उद्यमीलाई खाद्य उत्पादन गर्न आउँछ, तर गणस्तर कसरी कायम राख्ने र उपभोग्य म्याद कसरी निर्धारण गर्ने भन्ने प्राविधिक ज्ञान हुँदैन ।
अधिकांश खाद्यवस्तुुको उपभोग्य मिति कानुनी औपचारिकता पूरा गर्नमात्र लेखिन्छ । यसको तात्पर्य म्याद समाप्त नभएका खाद्यवस्तुु गुणस्तरहीन पनि हुन सक्छन् भने अर्कोतिर म्याद नाघेका खाद्यवस्तुु गुणस्तरयुक्त पनि हुन सक्छन् । उद्योगले आफ्नै प्रयोगशालामा गुणस्तर परीक्षण पश्चातमात्र बजारमा बिक्री–वितरण गर्न पाउने नियम बनाउन आवश्यक छ । विकसित देशमा यो नियम अनिवार्य छ ।
अमेरिकामा केही वर्षअघि मलमूत्र जस्ता फोहोरबाट उचित प्रविधि अपनाएर तयार पारिएको प्रशोधित पानी बिल गेट्सले पिएर उद्घाटन गरेको समाचार आयो । म्याद नाघेको खाद्यवस्तुुलाई पनि उचित प्रशोधनपश्चात उपभोग्य अवस्थामा ल्याउन सकिन्छ । सरकारले म्याद नाघेको खाद्यवस्तुु नष्ट गरिहाल्नुको सट्टा उद्योगीलाई नै त्यसको उचित र पारदर्शी व्यवस्थापनको जिम्मा लगाउँदा कसो होला ? म्याद नाघेका खाद्यवस्तुुबाट रोग वा हैजा फैलन सक्ने अवस्था आयो भने त्यस्ता वस्तुलाई नष्ट गर्नु राज्यको दायित्व हो ।
खाद्यवस्तुुको प्याकेटमा उपभोग्य मिति स्वेच्छाचारी ढंंगले लेख्दा भने उपभोक्तालाई असर पर्छ । कतिपय उद्योगीले आफ्ना उत्पादनलाई बजारमा धेरै अवधिसम्म बिक्री–वितरणमा राख्न पाइने लोभमा म्याद अत्यधिक राखेका हुन्छन् । त्यस्तो अवस्थामा म्याद छँदै वस्तुको गुणस्तर घटिसकेको हुन्छ । गुणस्तरहीन खाद्यवस्तुु बिक्री गैरकानुनी हो । यसले एकातिर दण्ड–जरिवानाको भागिदार हुनुपर्छ । उत्पादकले खाद्यवस्तुुको म्याद वैज्ञानिक विधिद्वारा निर्धारण गर्दा उत्पादककै हितकर हुन्छ भन्ने बुझ्न जरुरी छ । म्याद समाप्त भइसकेको खाद्यवस्तुुलाई उचित प्रविधिद्वारा पुन: उपयोगमा ल्याउनसके खाद्यवस्तुु नाश हुनबाट बचाउन सकिन्छ । यसले खाद्य सुरक्षामा मद्दत पुर्‍याउँछ ।
यस लेखको आशय गुणस्तरहीन खाद्यवस्तुु बिक्री–वितरण गर्नेलाई उन्मुक्ति दिनुपर्छ भन्ने होइन । उपभोक्ताले गुणस्तरयुक्त खाद्यवस्तुुका लागि पैसा खर्चिने भएकाले न्युन गुणस्तरको खाद्यवस्तुु बिक्री–वितरण गर्नेलाई कानुनी उपचारको दायरामा ल्याउनु अनिवार्य छ । तसर्थ २०२३ सालमा लागू भएको खाद्य ऐनले त्यसताका तोकेको बढीमा ५ हजार रुपैयाँ जरिवानालाई समय–सापेक्ष बनाउनु अपरिहार्य छ । खाद्यवस्तुु नष्ट गर्ने कार्यलाई भने दण्ड–जरिवानाको विकल्पका रूपमा हेरिनु हुँदैन ।
ढकाल खाद्य विज्ञान तथा प्रविधिमा विद्यावारिधि हुन् ।
प्रकाशित : श्रावण २९, २०७५ ०७:४८
श्रावण २९, २०७५ हरिकृष्ण उप्रेती
काठमाडौँ — गत वर्षको बर्खे झरीमा राजधानीको सामाखुसी र गोंगबु क्षेत्रमा स्कुले बच्चा ढल हुँदै खोलामा पुगे । एक बालिकाको इहलीला समाप्त भयो । अर्कीले धन्न ज्यान जोगाइन् । भर्खर चुनाव जितेका काठमाडौं महानगर प्रमुखले आइन्दा त्यस्तो समस्या हुने छैन भन्दै पीडित परिवारजनलाई आश्वस्त पार्ने कोसिस गरे । तर त्यस क्षेत्रमा अपेक्षाकृत सुधार हुनसकेको छैन ।
यही वर्ष दुई पटकसम्म हनुमन्ते खोलाले भक्तपुरका बस्तीमा वितण्डा मच्चायो । उपत्यका बाहिर पनि खोला र नदी किनारका बस्ती जोखिममा परेका र बगेका खबर आइरहेका छन् ।
भनिन्छ, प्रकृतिले आफ्नो बाटो आफैं तय गर्छ । नेपाली परम्पराले पनि पाखो र उँचो जमिनमा घर बनाउने, गहिरो–होचो र खोला छेउछाउमा खेती गर्ने भन्छ । तर खोलाले चर्चने क्षेत्र मिचेर हाम्रा सहर बन्ने क्रमले तीव्रता पाइरहेको छ । विदेशीहरू भने ‘रुम फर रिभर’ भनेर नदी उकास क्षेत्रमात्र नभई समुद्री किनारमा समेत राज्यकै तर्फबाट म्यानग्रुभ भन्ने प्रजातिका बिरुवा हुर्काइ बढाइरहेका छन् । नदी उकास र समुद्री किनारलाई सिमसार क्षेत्रका रूपमा गणना गरी समुदायलाई लाभ–लागतको हिसाब गर्न सिकाउँदैछन् ।
प्रतिफल समन्यायिक ढंगले वितरण गर्ने नीति अख्तियार गर्दै उनीहरूको सहभागिता सुनिश्चित गरी मानव बस्ती जोगाउन लागिपरेका छन् । हामीकहाँ सरकारकै निकायहरू खोलाका बगर जलविद्युत परियोजनालाई दिनुपर्दा वन क्षेत्रका रूपमा गणना गरी हतोत्साही बनाउन पछि पर्दैनन् । विकासे परियोजना नभएका नदी उकास क्षेत्रमा वृक्षरोपण गरी हराभरा बनाउने रुचि देखिँदैन ।
नेदरल्यान्ड्सले पानी व्यवस्थापनलाई उच्च शिक्षाकै रूपमा अध्ययन–अध्यापन गराउँछ । समुद्र सतहभन्दा होचो भूभागसमेत आफ्नो मुलुकमा भएकाले होला, नेदरल्यान्ड्सले पानी व्यवस्थापनमा निकै जोड दिन्छ । हामीकहाँ समुद्री सतहभन्दा होचो भूभाग छैन । तर नदी उकास क्षेत्र छन् । तिनको अतिक्रमण तीव्र छ । सडक मार्गले प्राय: खोला वा नदी किनारलाई पछ्याएका छन् । सडक बनेपछि सर्वसाधारण विकास आएको ठान्छन् र विकासको स्वाद चाख्न त्यतै हुत्तिन्छन् । बर्खे भेल उर्लेर आउँदा खोला मानवले अतिक्रमण गरेको क्षेत्र हुँदै बग्छ । अनि हामी अत्तालिन्छौं, भन्छौं– कहिल्यै नदेखेको बाढी बेहोर्नुपर्‍यो ।
नेपालको मौसमी प्रणाली खहरे उराल्ने खालकै छ । वर्षैभरि समान हिसाबले पानी पर्दैन । हल्का हिउँदे वर्षा हुन्छ । वर्षको लगभग ४ महिनामा भने बाढी–पहिरो जानेगरी मुसलधारे वर्षा हुन्छ । कैयौं विज्ञ माल्दिभ्समा नेपालकै माटोले नयाँ टापु बन्दैछ भन्छन् । अनावृष्टि, खण्डवृष्टि र अतिवृष्टि अर्थात् मुसलधारे वर्षालाई जलवायु परिवर्तनको संकेत मान्छन् । थोरै समयमा धेरै पानी पर्ने प्रवृत्ति छ ।
पानीमा रुझ्दै हिँडेको व्यक्ति एकैछिनमा पानीको छिटा नपरेको क्षेत्रमा पुग्छ । वर्षाको यस चक्रलाई पछ्याउन नसक्दा वा नजान्दा धनजनकै क्षति बेहोर्नु परिरहेको छ । बाढी–पहिरोको चपेटामा पर्नेको संख्या बढ्दो छ । यसले सहरी गरिबलाई बढी जोखिममा पारेको छ । वर्षा र गर्मी अधिक हुने मौसम भएकाले बाढीपश्चात् अनेक रोगका संक्रमण फैलन्छन् । औषधिमूलोमा खर्च बढ्छ ।
गर्नसके गाउँका पाखामा मकै, कोदो, मास वा फापरको उब्जनी प्रशस्तै हुन्छ । उब्जनी न्युन हुने पाखोबारीमा घरघडेरी बनाउने र बेंँसीमा भएको खेतमा धान, गहुँ फलाउने परम्परा छ । बाटाको अभावमा धान, पराल मान्छेले बोकिरहेका छन् । सुखको खोजीमा भौंतारिँदै सहर पस्दा कैयौंले खोला किनारमा घर बनाएका छन् । कति त सहरी सुकुम्बासी बनेका छन् । सुखभोग गर्न हिँडेका तिनै दु:खी सर्वसाधारणलाई बाढीको वितण्डाले लखेटेको छ । भौतिक सुविधा खोज्दा मानव बस्ती उजाड र रङ उडेको खण्डहरमा परिणत हुने खतरा बढ्दै गएको छ।
राजधानीमा बस्ती जोड्न बनाइएका नदी किनारका हुन् वा अन्यत्रका सडक प्राय: सबै कच्ची, खण्डास्मित र अलकत्रे छन् । ती संरचना बर्खेभेल निकास हुनेगरी बनाइएका छैनन् । जमल होस् वा जोरपाटी, राजधानीका प्राय: सबै सडक पानी पर्ने बित्तिकै आहालमा परिणत हुन्छन् । सडकमा जमेको पानी निकास हुन घन्टौं लाग्छ । बौद्ध–जोरपाटीतिर त निकास पनि हुँदैन । आवास क्षेत्रको मलमूत्र निकासका लागि निर्माण भएका ढलले बर्खेभेलको पानी कटाउन सक्दैनन् । ढलका मुख पनि सहरी फोहोर–मैलाले बन्द भएका हुन्छन् । महानगरसँग फोहोर–मैला र सडकसमेत सफा गर्ने कामदार छन्, तर ती सबै कामभन्दा राजनीति बढी गर्छन् ।
सहरका खाली ठाउँमा बगैंचाभन्दा रूख लगाउने परिपाटी थालनी गर्नसके वर्षातको पानी फैलाउन, धुलो नियन्त्रण गर्न र हावाको वेग रोक्न मद्दत पुग्छ । अग्ला होइन, मसलाका बिरुवा उपयुक्त हुन्छन् । सामान्य बतास पनि छेक्न नसकी जरैसहित ढले दुर्घटना हुनसक्ने भएकाले वृक्षरोपण योजना सजगतासाथ बनाउनुपर्छ । कपुरजस्ता होचा र झम्म परेका रुखबिरुवा उपत्यकाका लागि उपयुक्त हुन सक्छन् । वनविज्ञको सल्लाह–सुझावमा महानगर वा सडक विभागले सहकार्य र समन्वयका साथ वृक्षरोपण गर्नसके प्राकृतिक बहाव नियन्त्रण गर्न, बस्ती जोगाउन र हरियालीयुक्त सहर बनाउन सकिन्छ ।
प्रकाशित : श्रावण २९, २०७५ ०७:४७